Messi ma’ahan bini’aadam… (Rikoorkaan ayaana kuu xaqiijinaya arrintaas!) – Gool FM
Messi ma’ahan bini’aadam… (Rikoorkaan ayaana kuu xaqiijinaya arrintaas!)
Haaruun January 2, 2020
(Barcelona) 02 Jan 2020. Lionel Messi ma’ahan bini’aadam, waa sida uu cinwaan ka dhigay Wargeyska Sport ee dalka Spain, xilli uu ka hadlayay waxqabadka Kabtanka Kooxda Barcelona mudada 10-kii sano ee la soo dhaafay, laga soo bilaabo 2010 illaa 2020.
Wargeyska Sport ayaa wariyey in Lionel Messi uu gaaray wax aysan gaarin dhammaan ciyaartoyda kale ee jiilkiisa ah tobankii sano ee la soo dhaafay, wuxuu dhaliyey goolal ka badan tirada kulammadii uu ciyaaray.
Lionel Messi ayaa dhaliyey 522 gool mudada tobankii sano ee la soo dhaafay, wuxuuna ku dhaliyey goolashaas gaaray 521 kulan oo kaliya, waana laacibka kaliya caalamka ee dhaliyey in ka badan hal gool kulan kasta 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Xiddiga kaliya ee ku dhow rikoorka Lionel Messi ayaa ah laacibka ay ku xafiiltamaan kubadda cagta kaasoo u ciyaara haatan kooxda Juventus, isagoo tobankii sano ee la soo dhaafay CR7 dhaliyey 477 gool 489 kulan oo uu ciyaaray.
Kaddib Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waxaa kaalinta saddexaad ka soo galay rikoorkan xiddiga reer Poland iyo Kooxda Bayern Munich, Robert Lewandowski kaasoo mudada tobankii sano ee la soo dhaafay ku dhaliyey 324 gool kaddib 545 kulan oo uu ciyaaray.
Xiddiga reer Uruguay ee Edison Cavani ayaa kaalinta afaraad ka soo galay qiimeyntan kaasoo dhaliyey 309 gool kaddib 447 kulan oo uu ciyaaray tobankii sano ee la soo dhaafay, halka Luis Suárez uu kaalinta shanaad ka soo galay qiimeyntan kaddib markii 303 gool ku dhaliyey 445 kulan uu ciyaaray tobankii sano ee laga soo gudbay.
Zlatan Ibrahimovic oo ka soo degay Magaalada Milan si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda Rossoneri…+SAWIRRO
Van Persie oo weerar ku qaaday tababare Ole Gunnar Solskjær kaddib guuldarradii kooxda Arsenal